TWS Tronsmart Spunky Beat ekweisi nyocha, mara nkọwa. | Akụkọ akụrụngwa
Taa, anyị na-agwa gị okwu ọzọ ekweisi ikuku wireless TWS. N'oge a, n'aka otu ụlọ ọrụ a ma ama, ndị Ihe omumu Ogbogu Okonji Un emeputaNnenna mgbe niile metụtara egwu na ngalaba ụda nke na-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ iji gaa n'ihu na-enye ozi ọhụụ.
Oge a ka anyị nwee ike ịnwale Spunky Beat maka ụbọchị ole na ole. Fọdụ obere ma ruru eru ekweisi. Ọ bụrụ na ị ka na-achọ ekweisi ikuku na-arụ ọrụ ahụ, echefula nkọwa, mgbe ahụ anyị ga-agwa gị ihe anyị hụrụ maka Spunky Beat si Tronsmart.
1 Mfe na ihe ịga nke ọma imewe
2 Okwu / chaja dị iche
3 Clear ụda na elu uzu
4 Tronsmart Spunky Beat Nkọwapụta nkọwa
5 Uru na ọghọm Tronsmart Spunky Beat
Mfe na ihe ịga nke ọma imewe
Dị ka anyị si mara, imewe nke ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ gadjet na-aghọwanye ihe dị mkpa. Ikekwe ejiji nwere ọtụtụ ihe iji ya, yana ọkachasị mmasị onwe onye nke onye ọrụ ọ bụla. Dị ka ọ dị n'uwe, dịka ọmụmaatụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị ahụ ihe anyị na-agaghị eyikwasị ma ọlị, ọ dị mgbe niile onye ahịa ga-eche echiche ọzọ.
Ọ bụ ya mere anyị na-ahụ n'ahịa dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agba mbọ ịmepụta ngwaọrụ na-adọrọ anya ma obu jiri agba di ike. O dokwara anya na enwere ọha maka ya. Ihe omumu, na ekweisi TWS Spunky Beat i meela mkpebi doro anya. Inghọrọ a agba nke ahụ apụtaghị n'ụdị dịka ya nwaya na otu kenkowaputa imecha ọ nọwo na-egbu dị ka nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-achọ ekweisi dị ka ndị a, zụta Tronsmart Spunky Beat ebe a na Amazon na mbupu n'efu.
Ọ bụrụ na anyị na-ele ekweisi, na mgbakwunye na agba, anyị na-edebe a minimalist imewe nke ihe ọ bụla na-ekpe ma ọ bụ na-efu. Na a obere size na intraural usoro nke dabara n'ụzọ magburu onwe ya. Na otu ebe, ihe ọ bụla na-apụta na ntị. N'ihi atọ dị iche iche na mpe mpe akwa nha na anyị ga-ahụ n'ime igbe ahụ, ihe kwesịrị ekwesị ga-ekwe nkwa maka onye ọrụ ọ bụla, nke a ga-emekwa ka ahụmịhe ahụ ka mma.
Na mpụga akụkụ anyị nwere mpaghara aka nke anyi nwere ike iji mekorita ihe kariri anya. N'ihi ezigbo ọrụ ngwanrọ, n'etiti ekweisi abụọ anyị nwere ike inye isii dị iche iche iwu jiri otu okpukpu ma ọ bụ abụọ. Karịa ihe anyị na-ahụkarị na ngwaọrụ nke ụdị a. Mafere egwu na-aga n'ihu ma ọ bụ azụ, kpọọ ma ọ bụ kwusi mmeputakwa, zaa ma ọ bụ jụ oku na ọbụna kpọọ onye inyeaka olu anyị.
Okwu / chaja dị iche
Anyị amaworị na ụdị ekweisi niile TWS dị n'ahịa nwere a ikpe na okpukpu abụọ dị ka chaja. N'ihe banyere Tronsmart Spunky Beat, ikpe ya nwere nkọwa ụfọdụ nke dị iche na ndị ọzọ. Ozugbo ozugbo Ibu ibu ikike, ikpe nke ekweisi ndị a nwere 350 mAh. Anyị ekwela nkwa ruru 5 isi headphone ebubo ọ dịghị mkpa ịpịnye ha.
Naanị n'oge a, mgbe ị na-agbanye ha na ike maka ịkwụ ụgwọ, Okwu ikpe Spunky Beat na-enye nhọrọ nke rue ugbu a anyị enweghị ahụghị n'ụdị ọzọ. Na mgbakwunye na ọdụ ụgbọ mmiri nke loading, na nke a anyị na-amasị n'ezie ịhụ na Ọdụ USB Type-C. Okwu ikpe a nwere eriri nke ya na eriri USB na akọ na zuru oke akpọre anyị nwere ike ịchọta na ala nke ya
O doro anya na ọ bụ ihe ọhụrụ karịa ka ọ bara uru. Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na Anyị agaghị achọ eriri mpụga iji jikọọ ekweisi ma nye ha ụgwọ Nke batrị. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe a nwalechara ya dị ka ibu, a na-agbanye eriri ahụ n'ụzọ dị ala na ala na-enweghị ike ịgbanahụ ma nwee ike ịkpaghasị.
Nkọwa ọzọ dị ntakịrị bụ na mkpuchi n'onwe ya Ọ nwere obere akpụkpọ anụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu ihe, enwere ike iji ya kwụgidere igwe kwụ otu ebe, mgbanaka igodo ma ọ bụ ọbụlagodi iji kpọgide ya na mkpịsị aka mgbe anyị na-eje ije. Ihe na agbanyeghị na ọ nwere ike bụrụ ezigbo ihe, n'ụdị ọzọ ọ bụla anyị ga-achọ mgbakwunye ma ọ bụ mkpuchi ọzọ.
Igweisi TWS Spunky Beat na ọnụahịa kacha mma na Amazon
Clear ụda na elu uzu
More ma ọ bụ na-erughị mara mma, dị ka ọtụtụ ma ọ bụ obere, anyị na-ekwu okwu a ngwaọrụ metụtara ụda. Na Spunky Beats si Tronsmart gbaa mbọ hụ na nke a anaghị ahụrụ mgbe anyị na-anwale ha. Na ụda àgwà ọ na-enye juru anyị anya ọma. Graphene ntekwasa ọkwọ ụgbọala na-enye a oke zuru ezu ụda na ụfọdụ miri emi. Akụkụ ndị anyị ga-achọ ịghọta mgbe anyị welitere olu anyị elu.
Ọ dị mkpa ịmata na Spunky Beat nwere a mgbawa kere na mepụtara site Qualcomm, ndị QCC3020. Ihe na achi achi a ezigbo arụmọrụ na a mgbe nile audio gụgharia enweghị ọnwụnye ụfọdụ. N'ihi 5.0 Bluetooth nnyefe na njikọta dị nnọọ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ekele diri ndi Teknụzụ DSP na cVc Mepụtara Qualcomm, oku na-enweta na àgwà na doo anya. Ejikọtara na izu okè anyị nwere ike ime oku na-ekwu okwu na ekwentị na a doro anya na crisp audio nnyefe. Teknụzụ DSP na-egbochi mkpọtụ ndabere. Na teknụzụ cVc na-elekọta chịkwaa ala dị ala ma dị ala maka ụda immersive ọzọ. Ọtụtụ karịa ka ị tụrụ anya maka ihe na-erughị € 30, ịtụ gị Tronsmart Spunky Beat ugbu a na Amazon
Ihe ndi ozo nke Spunky Beat nyere bu enwere ike iji ha iche iche ma jikọọ na ngwaọrụ dị iche iche. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike jiri ekweisi abụọ n'otu oge site na ijikọ onye ọ bụla na ama dị iche na ụda “mono”. Dị ka anyị maara, Ezi Ikuku Sound ekweisi na-enye njikọ ikuku, ma Tronsmart na-aga n'ihu site n'inye ha ohere na ha na-arụ ọrụ n'otu n'otu.
Tronsmart Spunky Beat Nkọwapụta nkọwa
Nlereanya Ogbogu Okonji
mgbawa Qualcomm QCC3020
Nzipu anya ruo mita iri
Onwe ya ruo awa 7
Igwe batrị 350 mAh
Ekweisi Nchaji oge Nkeji 50
Ileba oge Awa 2
Akụkụ ekweisi X x 27 17 8 mm
Akụkụ akụkụ X x 68 45 31 mm
Ibu ekweisi 3.7 g
Ibe n'ọbọ 47 g
Ahịa 29.99 €
Linkzụta njikọ Tronsmart Spunky Naa
Uru na ọghọm Tronsmart Spunky Beat
Belata nha Ọ dabara n'ụzọ zuru oke na ntị nwere ezigbo mma.
Ohere nke jiri ma ekweisi onwe ha n'out oge na "mono".
Imebe mfe ma mara.
El peso ọ bụ n’ezie ìhè na ị chọpụtaghị na ị na-eyi ha.
Ojiji nke onwe
Ekweisi bụ rapaara na magnet mgbe ha na-akwụ ụgwọ na ọ na-ewe ntakịrị iwepu ha n'okwu ahụ.
La ikpe dị ntakịrị ihe na-emebi emebi ma enwere ike iji obere ọdịda daa ya.
La nnwere onwe dịgasị iche iche dabere na ọkwa olu nke anyị ji ekweisi.
O siri ike iwepu ikpe ahụ
Ikpe na-emebi emebi
Agbanwe ọchịchị obodo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Tronsmart Spunky Beat ekweisi nyocha